आफ्नै श्रीमति र छोराले ओठको सिलाई गरे, त्यसपछि हातखुट्टा बाँधेर जिउँदै फालिदिए
कस्तो समाज ?
भुक्तभोगी बनेका भोलालाई उनकै छोरा र श्रीमतिले उनको मुखलाई सिलाई गरी बाँधेर रेल्वे पटरीमा फालिदिएका थिए ।
२०७८ श्रावण १ शुक्रबार
बिहान १०:५५ बजे
न्यूज ब्यूरो । आफ्नै छोरा र श्रीमति मिलेर एक वृद्धको मुख सिलाई गरेर हातखुट्टा बाँधी फालिदिएको घटना बाहिर आएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतको झारखण्ड राज्यस्थित पलामु जिल्लामा एक वृद्धलाई मुखको ओठ सिलाई गरी रेल्वे पटरीमा फालिदिएको घटना बाहिर आएको छ । स्थानीय ६५ बर्षिय भोला रामको ओठ सियो धागोले सिलेर पटरीमा फालिएको अवस्थामा भेटिएको हो ।
बुधबार बिहान सिगसिगीस्थित रेल्वे पटरीमा बाँधिएको अवस्थामा भोला राम भेटिएको हो । उनको मुख सिलिएको अवस्थामा हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थामा फेला परेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ ।
पलामु जिल्लाको उँटारी रोड थानाको भीतिहारा गाउँको मँझलीघाट टोल बस्ने भोला राम राती पिसाब फेर्न बाहिर निस्केको बेला केही जनाले उनलाई समातेर लगेको बताएको छ । प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा उनले केही जनाले उनलाई उठाएर लगेको थियो ।
भोलाले पहिलो श्रीमतिबाट जन्मेका छोरा र दोस्रो श्रीमति सबिता देवीले मिलेर अन्य केही जनासहित उनलाई कुटपिट गर्नुका साथै मुख समेत सिलाई गरिदिएको हो ।
कुटपिट गर्दै जबरदस्ती भोलाको मुखलाई सिलाई गरी राती करिब ११ बजेको समयमा रेल्वे पटरीमा डोरीले उनको हातखुट्टा बाँधेर पटरीमा फालिदिएको बताए । विहान करिब ५ बजे स्थानीयहरु खेततर्फ जाँदा उनलाई देखेपछि प्रहरीलाई खवर गरेको थियो ।
भोलालाई रेल्वेको पटरीसँग बाँधिएको देखेपछि स्थानीयहरुले गाउँलेहरुलाई बोलाउनुको साथै प्रहरीलाई समेत जानकारी गराएको थियो । तुरुन्तै आएको प्रहरीले उनलाई पटरीबाट खोलेर स्थानीय क्लीनिकमा लगी सिलिएको मुखको धागो काटेको थियो ।
जानकारी अनुसार, केही महिनाअघि भोला र उनकी श्रीमति सबिता देवीबीच विवाद भएको थियो । त्यसपछि गाउँमै पँचायत पनि भएको थियो तर, सबितालाई राहत नमिलेपछि उनले यस्तो गरेको हुन सक्ने बताइएको छ ।
भुक्तभोगी बनेका भोलालाई उनकै छोरा र श्रीमतिले उनको मुखलाई सिलाई गरी बाँधेर रेल्वे पटरीमा फालिदिएका थिए । पहिलो श्रीमतिको मृत्यूपछि गत सन् २०१० मा उनको अर्को विहे भएको थियो ।
खानेपानीका ईन्जिनीयर साह १० लाख बढी रुपैयाँ सहित पक्राउ
न्यूज ब्यूरो, रुपन्देही । नेपाल खानेपानी संस्थानका एक ईन्जिनीयर १० लाख बढीको श्रोत नखुलेको रकम सहित अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । नेपाल खानेपानी सँस्थान बुटवल, रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर सन्तोष
न्यूज ब्यूरो, रुपन्देही । नेपाल खानेपानी संस्थानका एक ईन्जिनीयर १० लाख बढीको श्रोत नखुलेको रकम सहित अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । नेपाल खानेपानी सँस्थान बुटवल, रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर सन्तोष साह श्रोत नखुलेको रकमसहित धादिङबाट पक्राउ परेका हुन् ।
साहले खानेपानी शाखा कार्यालयहरुको विभिन्न व्यक्तिहरुसंग घुसररिसवत रकम उठाई काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालबाट खटेको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
टोलीले इन्जिनियर साहलाई उक्त संस्थानको लु १ ञ ९५ नम्बरको गाडीमा बुटवलबाट काठमाण्डौ जाँदै गर्दा जिल्ला धादिङ धुनिवेसी नगरपालिका वडा नं. ८ खानीखोलामा गाडी चेक जाँच गर्ने क्रममा पक्राउ परेका छन् ।
साहसँग रहेको श्रोत नखुलेको नगद रकम २ लाख ३३ हजार ५०० रुपैयाँ र बैंकमा जम्मा गरेको बैंक भौचर ८ लाख २२ हजार बराबरको रकम सहित आईतबार नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।
हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा तीस तालिबानको मृत्यु, सत्र घाइते
नोकरीबाट निकालेपछि कम्पाउण्डरले महिला डाक्टरलाई लगाए जबरदस्ती सिन्दुर, फोटो भाइरल
भारतमा ११८ दिनपछिकै सवैभन्दा थोरै सङ्क्रमित